"Triovite" kuyinto Vitamin ukulungiselela eziyinkimbinkimbi, okuyinto kuveza ngesimo kanzima gelatin amaphilisi. Umuthi kunomphumela ezuzisayo emzimbeni wonkana, ngakho odokotela nokushoda amavithamini ebekiwe Triovite kabani imfundo likhombisa Vitamin ukuxuba okulandelayo: b-carotene, siya ku umzimba, is kuguquka retinol (uvithamini A), adingekayo ukuze amathambo eqinile, impilo izinwele kanye lesikhumba; Vitamin C, oluqinisa ukuzivikela komzimba, futhi ngokuvamile isitha esibi kunazo zonke izifo kanye nezifo eziningi; kanye no-E - kuqinisa imithambo yegazi, futhi kuthuthukisa normalizes iseli umsoco. Zonke lezi amavithamini - Antioxidants yemvelo, ezisiza ukususa radicals khulula ezicutshini namaseli. Ngokusho ngemiphumela yocwaningo amaningi aba ukuthi amavithamini ewusizo ezifana ukusiza ukuvimbela ezinye izinhlobo umdlavuza, izifo kohlelo eziphathelene nenhliziyo, ukuvimbela nesenzakalo esweni futhi omzimba iziyaluyalu.
Abantu nge buthaka amasosha omzimba, ikakhulukazi ebusika, ungathatha ngokuphepha Triovite kabani Ukwakheka lihlanganisa impilo esibalulekile - selenium. Selenium abakwazi kuphela ukuvikela amasosha omzimba, okwandisa ukubekezelelana omzimba lamagciwane, kodwa futhi kubalulekile ukuba impilo nenhliziyo enempilo.
I eziyinkimbinkimbi amavithamini kokungaphezulu Antioxidants esihle - ejenti okuyinto ukuvimbela ukwakheka radicals khulula emzimbeni. Lapho siqu yesimiso sokuzivikela somzimba abakwazi ukusekela radicals khulula ibhalansi, singenzeka lesion amaseli. Ukuze ugweme lokhu, thatha ngokwanele elilodwa - amabili amaphilisi amavithamini "Triovite". Yokusetshenziswa ubonisa ukuthi capsule vitamin eziyinkimbinkimbi ngokwanele ukuba zilawule izinyanga ezimbili, futhi ngesilinganiso uphinda ezimbili - kathathu ngonyaka.
"Triovite" - amavithamini, ekwazi nethonya asebenzayo emzimbeni emangqamuzaneni, ngaphezu, izingxenye zawo umphelelisi ukusebenza nomunye, okwenza inhlanganisela yalezi amavithamini kunengqondo kakhulu. Ngenxa yalokho, umzimba livikela kakhulu izici kwezemvelo okunomthelela omubi kakhulu, futhi luye lwaqinisa izakhiwo zokuzivikela, encishisiwe ukuvuvukala, kubambezela inqubo yokuguga emangqamuzaneni.
Ngo Vitamin ukulungiselela "Triovite" manual uthi ukusebenzisa izinkomba ezilandelayo:
- ukuthatha izidakamizwa kulabo ngenxa yezimo ongawamukeli amavithamini kusukela ekudleni evamile;
- nomsebenzi engqondweni nasemzimbeni esebenzayo;
- asebekhulile, Ukuvikelwa kwemvelo iseli ohleshulelwe, esehlisa ukumuncwa amaminerali namavithamini ngendlela yemvelo;
- abantu babe umlutha kagwayi, njengoba umuntu obhema ngokusesilinganisweni umzimba yakha eziyingozi radicals khulula;
- abantu esenziwa izimo bavezwa ngemisebe (eside ukuthola phansi kwelanga, umsebenzi kwi-computer, njll);
- abantu abasebenza noma abahlala ezindaweni lezimboni izikhungo emadolobheni amakhulu.
Ukuze ukusetshenziswa kwezidakamizwa "Triovite" La mazwi abonisa le Izimo ezilandelayo:
- ungathathi vitamin eziyinkimbinkimbi nge ezifweni anda kunoma ingxenye zomuthi;
- abesifazane abenza ibele noma abesifazane abakhulelwe ukuthatha izidakamizwa kuphela kadokotela.
ukungaphathwa kahle imithi kuba kungenzeka ezimweni ezingajwayelekile, kungaholela komzimba nezinto ezinye izingxenye ukulungiswa. Nokho, endabeni yokusebenzisa izidakamizwa Kunconywa ngaphandle kokuphazamiseka, b-carotene kungadala ichaza ukushintsha kombala umchamo, futhi yellowing kwesikhumba, miphumela akuzona eziyingozi, kodwa zidinga ikhefu edonsa amavithamini.
Sidinga ukuthatha omunye - amabili Amaphilisi "Triovit" ngosuku ngemva kokudla engayitholi yenzelwe kalula ukuphatha - ugeze phansi ngamanzi.
Yini idume kangaka ngoba vitamin D?
Makeup ukuthwebula isithombe studio: imibono. New photo session e-studio